သင်ကော ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်သလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သင်ကော ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်သလဲ
Posted by manawphyulay on Aug 2, 2011 in Creative Writing | 25 comments
*** လူတစ်ယောက်ကို ကံကောင်းစေတဲ့စိတ်ဆိုတာ စိတ်ကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားချင်တဲ့စိတ်ပါပဲ။
*** မိမိအရည်အချင်းကို အသုံးမပြုဘဲ ထားချင်သောစိတ်သည် အပြင်ရန်သူထက် ပို၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်း၏။
*** သင်လိုချင်သော်လည်း အလွယ်တကူမရနိုင်သည်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်၏။ သင်မလိုချင်သော်လည်း အလွယ်တကူရနိုင်သောအရာမှာ ၀မ်းနည်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
*** အနာဂတ်ကာလ၏ လျောက်ရမယ့်လမ်းကို အကောင်းဆုံးထုဆစ်ပေးနိုင်သူမှာ အတိတ်ဘ၀၌ ကျန်ခဲ့သော မှားယွင်းမှုများပင် ဖြစ်သည်။ :e
***ပျားရည်လို ချိုမြိန်သော အချစ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်လို လှပသောဘ၀ ထိုနှစ်ခုကို ဆုံစည်းဖို့ နှလုံးသားကို လမ်းခင်းပေးပါ။
****ကံကောင်းချင်သူများကတော့ သူတို့ ရွေးချယ်ထားသောအလုပ်ကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ကောင်းအောင် လုပ်ကြတယ်။ ကံမကောင်းသူများကတော့ အလုပ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲလေ့ရှိကြသည်။
စာဖတ်သူကော ဘယ်ထဲမှာ ပါဝင်နေသလဲဟင်….
ဒါလေးတွေ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုတော့ ပြောပြပေးခဲ့ပါနော်……
လူဆိုတာ ကိုယ့်တိုးတတ်ရာ တိုးတတ်ကြောင်းရှာဖို့ လမ်းသစ်ဆိုတာဖောက်ရတာပဲလေ
နေရာတခုမှာဒါပဲရဒါပဲလုပ် တော့ ဘယ်ကောင်းမှာလဲ ငတုံးတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ မမရ…
တခါတလေတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နားလည်အောင်လုပ်ရတာ အခက်ဆုံးပဲ
ကိုယ်ဘာကိုလိုချင်တာလဲ ဘာလိုအပ်တာလဲ ဆိုလောက်တော့ သိသင့်တာပဲလေ
ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် လှုပ်ရှာရုန်းကန်နေတဲ့ အလုပ်တွေတိုင်းမှာ
ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်ဖို့ ဘယ်အရာကိုမဆို ထိုးဖေါက်လုပ်ဆောင်ရမှာပဲ။။
မြန်မာစကားပုံရှိတယ်လေ။ တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်။ သေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်း တဲ့။လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
“ ကံကောင်းချင်သူများကတော့ သူတို့ ရွေးချယ်ထားသောအလုပ်ကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ကောင်းအောင် လုပ်ကြတယ်။ ”
အမှန်ကတော့ ကံကောင်းချင်လို့ အလုပ်ကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ကောင်းအောင် လုပ်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ အလုပ်ကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ကောင်းအောင် လုပ်ကြ တာကတော့ လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်နေကြတာလို့ ပဲ မေကတော့ သတ်မှတ်တယ်။ မေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်တယ်။
မေ ရေ .. ကံကောင်းအောင် ရွေးချယ်ဖို့တော့လိုမယ်နော်…ရွေးချယ်တာမှားရင်တော့ တဆင့်ဆင့် ဆိုတာ
ညားတော့ လှေထိုးသား မဖြစ်ဖို့ လိုပါမယ်
ဒါဟာ manawphyulay တင်ထားတဲ့ပိုစ့်နော် ။ နင်တို့သူများတင်ထားတဲ့ ပိုစ့်မှာ ငါလွတ်လပ်စွာရေးထားတာကို မနှောက်ယှက်နဲ့။ ပိုစ့် ပိုင်ရှင်ကို အားနာသင့်ပါတယ်။ အပျက်သဘောနဲ့ မစဉ်းစားကြနဲ့။
ရွေးချယ်မိတဲ့ လမ်းအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်
ကံကောင်းမှု ရယ် ကံမကောင်းမှုရယ် ဆိုတာက ကိုယ့်လုပ်ရပ် အမှားအမှန်အပေါ်မှာ အဓိကကျတယ်
အဲ … လမ်းမှားရောက်နေပီထင်ရင် နောက်ပြန်လှည့်တာ အကောင်းဆုံးပါ..
………ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ ပါ..။
လွတ်လပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လွတ်လပ်စွာသီးသန့်နေကြသော သူများကိုဆိုလိုပါတယ်
ကံဆိုးမှုများစွာ နဲ့ မလွတ်မလပ်နေခဲ့ကြသူများ အတွက် မှာမူ သုံးစွဲရန်မသင့်တင့်ပါ
ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ပါ .၊
ကျွန်မတို့ သိကြတဲ့ အတိုင်းပါဘဲလေ။ဟိုအလုပ်လေးကောင်းနိုးနိုးဒီအလုပ်ကလေး ကောင်းမလားနဲ့ ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ လုပ်လာလိုက်တာ. ဘာအလုပ်မှမပြီးတော့ပါဘူး။ဘယ်အလုပ်ဘဲလုပ်လုပ်ပါ. အကောင်းအဆိုးအကျိုးအပြစ်သေချာစဉ်းစားပြီးမှလုပ်သင့် ကူညီသင့်ပါတယ်။မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး. ငှက်မသိ ဆက်ရက်ဂျိုးထင် ကြောင်သူတော်ကြွက်သူခိုး၊သူခိုးလမ်းပြမလုပ်မိဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်
ယခုပင် ငါသေသွားသော်.. ငါတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု များများ မရှိသည့် အတွက် ဘယ်သူမှ ဒုတ်ဓါးဆွဲ လုမည် မဟုတ်။
ထို့ကြောင့် ငါ အပေါ် မှီတည်ပြီး မည်သူ တစ်ဦး တယောက်မှ လောဘ စိတ် ဖြစ်မည် မထင်။
သို့အတွက်ကြောင့် ငါသေသွားပြီး နောက်ပိုင်း ငါနဲ့ ပတ်သတ်သူများ ငါ့ အတွက်နှင့် အကုသိုလ် မဖြစ်တဲ့ အတွက် ငါ့ တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု များများ မရှိခြင်းသည် ထိုလူများ အတွက် ကံကောင်းဖြစ် မည်တည်ပါ၏
သို့ ပေသည့် ကြိုးစားရမှာပဲ
ပန်းနု လဲ ဒီလိုပါပဲ မသေခင် အတောအတွင်း ကြိုးစားနေရတာပါပဲ
အလုပ်ပြောင်းတာတော့ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ အပြစ်ပြောလို့မရဘူး။အဲဒီအလုပ်က တစ်သက်လုံးလုပ်ရင်ဘယ်အထိဖြစ်နိုင်လဲ ရာထူး၊ ငွေကြေး။သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှူ ။ဘ၀ကိုငွေအတွက်ရောင်းစားမှာလား။အများကြီးပါ။လက်ကြောမတင်းလို့ပြောင်းတာနဲ့ ဘ၀အတွက်ဘယ်လိုမှအကျိူးမရှိလို့ပြောင်းတာ။မတူပါဘူး။
သိပ်မှန်တာပေါ့ lusoegyikoko ရယ်
အလွယ်တကူ ရနိင် ရောက်နေနိင်တာ ဖုန်တွေအမှိုက်တွေပါ
မောင်ခိုင်မြဲ တံပျက်စည်းလဲ လက်လျော.နေရပြီ
လက်ရှိရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ ခြေမြဲအောင်ရပ်ပါ။
ပြီးမှ လက်လှမ်းမှီရာ လက်မြဲအောင် ကိုင်ဆွဲပါ။
နောက်တကြိမ် ရောက်တဲ့ အရပ်မှာ ခြေမြဲအောင်ရပ်ပါ။
ဤနည်းကား လက်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ကျင့်သုံးနေသောနည်းဖြစ်ပါသည်။
ကံမကောင်းသူများကတော့ အလုပ်တခုမှတခုသို.အလွယ်တကူပြောင်းလေ့ ရှိကြသည်တဲ့။ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ကံမကောင်းဘဲနဲ. အလုပ်တခုမှတခုကို အလွယ်ပြောင်းလို.မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
မိန်းကလေးများ အပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်းသည် လောကတွင် ယောက်ျားကောင်းတွေ ရှားပါးသောကြောင့် ဖြစ်ပြီး ယောက်ျားလေးတွေ လူပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်းသည် လောကတွင် ရှိသမျှ မိန်းကလေးတွေ ပြန်မကြိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (ဟီး ဦးမိုက်ကယ်ကြီး မှတ်ကရော) …
လူချင်ကွဲပါတယ် ဒါလုပ်လိုကောင်းတဲလူရှိသလို ဒါလုပ်လိုက်လို မကောင်းဖြစ်သွားတဲလူလဲရှိတာပဲလေ
ကိုယ်ကတော့ အသက်14 နှစ်မှာ ပီမိုးနင်းရဲ့စာအုပ်တွေ ထဲ က စိတ်ပညာ ဆိုင်၇ာ နဲ့ တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ အုပ်20 လောက်ထိ ဖတ်ခဲ့ တယ် ။ အဲဒီ မှာ…အသက် 16 လောက်ရောက်တော့ ကိုယ် ဘာလဲ..ဆိုတာ ကိုယ့် ဘာသာ သိသွားတယ် ။ ကိုယ့် ကို ကိုယ် ပြန် မြင်သွားတာပေါ့ ။
ဒါပေမယ့်ကိုယ် က ဘာ ….ဆိုတာကို တခြားသူတွေကို ပြန်မပြောချင်တော့ ဘူး။ ကိုယ် ဘာ လဲ….ဆိုတာကို ကိုယ့် လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ က ဖော်ပြနေတယ်လေ။
သေချာတာကတော့….. အမှားတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ မမှားချင်တဲ့ သူ….။ အမှားနည်းအောင်..လုပ် ကိုင်နေထိုင်နေသူ……လို့သတ်မှတ်ရင် ..ရမှာပါ။
One good thing isawriting “dairy” daily.But , here, you have to write down all things of the whole day.
When you find that it is very difficult to write all things, you will get many thoughts about “right or wrong”. Ok?
Can you create your own “court” by yourself?